လိင်ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး အမျိုးသမီး ၅ဦး မှာ ၄ဦးက ပြုလုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးများ (18+) - ACHITLWINPYIN
HomeSEXY KNOWLEDGEလိင်ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး အမျိုးသမီး ၅ဦး မှာ ၄ဦးက ပြုလုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးများ (18+)
လိင်ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး အမျိုးသမီး ၅ဦး မှာ ၄ဦးက ပြုလုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးများ (18+)
March 12, 2018 Kwee Thiha SEXY KNOWLEDGE Comments Off on လိင်ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး အမျိုးသမီး ၅ဦး မှာ ၄ဦးက ပြုလုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးများ (18+)
၁- ချစ်တင်းနှောနေချိန်မှာ ညစ်ညမ်းတဲ့ စကားလုံးသုံးကြည့်ချင်တာ
အမျိုးသမီးထုရဲ့ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းဟာ လိင်ဆက်ဆံ နေတဲ့အချိန်မှာ ညစ်ညမ်း တဲ့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းကို ကြားချင်ကြပါတယ်။ ဦးနှောက်ဟာ စွမ်းအားအကြီးဆုံး အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ညစ်ညမ်းတဲ့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွေကြောင့် ဆက်ဆံရာမှာ ပိုပြီး လှုံဆော်ပေးသလိုဖြစ်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းတွေက စိတ်ကို လျော့ချပေးရုံတင်မကပဲ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆက်ဆံတဲ့အခါ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း သိရှိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ – အထိအတွေ့နဲ့ပက်သက်ပြီး ကောင်းတဲ့ခံစားမှုအကြောင်း မျက်လုံးချင်းအကြည့်ဆုံတဲ့အခါ နှစ်ခြိုက်စရာကောင်းကြောင်းစသည်တို့ပဖြစ်ပါတယ်။
၂- အဖော်အချွတ် ကလပ်ကိုအတူတူသွားတာ
အမျိုးသမီးထုရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ သူတို့ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံသူ အဖော်နဲ့အတူ အဖော်အချွတ်ကလပ်များကို သွားကြည့်ချင်ကြပါတယ်။ အဖော်အချွတ်ကလပ်တွေဟာ လိင်စိတ်စွမ်းအားကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်တဲ့ အဓိကနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၄င်းတို့ဟာ အဆိုပါ ကလပ်များကနေ အစပြုပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ ဆက်ဆံမှုတွေကို ဖန်တီးချင်တဲ့ စိတ်ကူးကြောင့်ပဖြစ်ပါတယ်။
၃ – Remote sex toys တွေကို သုံးကြည့်ချင်တာ
၆၃ ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသမီးများကတော့ sex toys များကို အသုံးပြုကြည့်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးတွေရှိကြပြီး ၄၄ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသမီးများကတော့ သူတို့ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖော် ကို remote မှတဆင့် သူတို့ကို လှုံဆော်ပေးတာကို လိုချင်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ လူအများရှိနေတဲ့အချိန်မှာ အဝေးထိန်း remote နဲ့ ဘယ်သူမှ မသိအောင် သူတို့ကို စနောက် ကြတာကို သဘောကျကြပါတယ်။
၄- လိင်ဆက်ဆံနေတဲ့အချိန် သူတို့ မျက်လုံး ကို ပုဝါနဲ့ ဖုံးအုပ်ခြင်းခံရတာ
၅၈ ရာခိုင်နှုန်းသော အမျိုးသမီး တွေဟာ လိင်ဆက်ဆံနေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ မျက်လုံး ကို ပုဝါ နဲ့ စည်းထားတာကို သဘောကျကြပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနဲ့ အထိအတွေ့ခံစားချက်တွေကို တိုးမြှင့်လှုံဆော်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ ခံစားချက်က ၄င်းတို့ကို ပျော်ရွှင်စေပါတယ်။
Share From Writer:Chris (Daily Hot News)
လူတိုငျးမှာ ခဈြတငျးနှောတာနဲ့ ပကျသကျပွီး ကိုယျပိုငျစိတျကူးကိုယျစီရှိကွပမေယျ့ တကယျ့လကျတှလေ့ောကနဲ့ မတိုကျဆိုငျတာကွောငျ့တဈကွောငျး၊ စိတျကူးယဉျမှုသကျသကျသာဖွဈတာက တဈကွောငျးကွောငျ့ မပွုလုပျဖွဈကွတာမြားပါတယျ။
အမြိုးသားတှသောမက အမြိုးသမီးမြားမှာလညျး ခဈြတငျးနှောတာနဲ့ပကျသကျပွီး ကိုယျပိုငျစိတျကူးလေးတှရှေိကွပါတယျ။ အမြိုးသမီး ၅ ဦးမှာ ၄ ဦးလောကျ စိတျကူးဖွဈတဲ့ အကွောငျးအရာလေးတှကေတော့….
၁- ခဈြတငျးနှောနခြေိနျမှာ ညဈညမျးတဲ့ စကားလုံးသုံးကွညျ့ခငျြတာ
အမြိုးသမီးထုရဲ့ ၈၁ ရာခိုငျနှုနျးဟာ လိငျဆကျဆံနတေဲ့အခြိနျမှာ ညဈညမျးတဲ့ စကားလုံးအသုံးအနှုနျးကို ကွားခငျြကွပါတယျ။ ဦးနှောကျဟာ စှမျးအားအကွီးဆုံး အရာတဈခုဖွဈပွီး ညဈညမျးတဲ့စကားလုံးအသုံးအနှုနျးတှကွေောငျ့ ဆကျဆံရာမှာ ပိုပွီး လှုံဆျောပေးသလိုဖွဈပါတယျ။
ညဈညမျးတဲ့စကားအသုံးအနှုနျးတှကေ စိတျကို လြော့ခပြေးရုံတငျမကပဲ တဈဦးနဲ့တဈဦး ဆကျဆံတဲ့အခါ လိုအပျခကျြတှကေိုလညျး သိရှိနိုငျတဲ့ နညျးလမျးကောငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဥပမာအနနေဲ့ – အထိအတှနေဲ့ပကျသကျပွီး ကောငျးတဲ့ခံစားမှုအကွောငျး မကျြလုံးခငျြးအကွညျ့ဆုံတဲ့အခါ နှဈခွိုကျစရာကောငျးကွောငျးစသညျတို့ပဖွဈပါတယျ။
၂- အဖျောအခြှတျ ကလပျကိုအတူတူသှားတာ
အမြိုးသမီးထုရဲ့ ၇၀ ရာခိုငျနှုနျးကတော့ သူတို့ရဲ့ လိငျဆကျဆံသူ အဖျောနဲ့အတူ အဖျောအခြှတျကလပျမြားကို သှားကွညျ့ခငျြကွပါတယျ။ အဖျောအခြှတျကလပျတှဟော လိငျစိတျစှမျးအားကို တိုးမွှငျ့ပေးနိုငျတဲ့ အဓိကနရောတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ၎င်းငျးတို့ဟာ အဆိုပါ ကလပျမြားကနေ အစပွုပွီး စိတျကူးယဉျဆနျတဲ့ ဆကျဆံမှုတှကေို ဖနျတီးခငျြတဲ့ စိတျကူးကွောငျ့ပဖွဈပါတယျ။
၃ – Remote sex toys တှကေို သုံးကွညျ့ခငျြတာ
၆၃ ရာခိုငျနှုနျးသောအမြိုးသမီးမြားကတော့ sex toys မြားကို အသုံးပွုကွညျ့ခငျြတဲ့ စိတျကူးတှရှေိကွပွီး ၄၄ရာခိုငျနှုနျးသောအမြိုးသမီးမြားကတော့ သူတို့ရဲ့ လိငျဆကျဆံဖျောကို remote မှတဆငျ့ သူတို့ကို လှုံဆျောပေးတာကို လိုခငျြကွပါတယျ။ တဈခြို့ကတော့ လူအမြားရှိနတေဲ့အခြိနျမှာ အဝေးထိနျး remote နဲ့ ဘယျသူမှ မသိအောငျ သူတို့ကို စနောကျ ကွတာကို သဘောကကြွပါတယျ။
၄- လိငျဆကျဆံနတေဲ့အခြိနျ သူတို့မကျြလုံးကို ပုဝါနဲ့ ဖုံးအုပျခွငျးခံရတာ
၅၈ ရာခိုငျနှုနျးသော အမြိုးသမီးတှဟော လိငျဆကျဆံနတေဲ့အခြိနျမှာ သူတို့ရဲ့ မကျြလုံးကို ပုဝါနဲ့ စညျးထားတာကို သဘောကကြွပါတယျ။ တဈဦးနဲ့ တဈဦး ယုံကွညျစိတျခခြွငျးနဲ့ အထိအတှခေံ့စားခကျြတှကေို တိုးမွှငျ့လှုံဆျောပေးနိုငျတဲ့အပွငျ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားဖို့ကောငျးတဲ့ ခံစားခကျြက ၎င်းငျးတို့ကို ပြျောရှငျစပေါတယျ။
မိန်းမရေ မင်းအိမ်မှာရှိတာ သေချာလား..? သေချာတာပေါ့ ယောက်ျားရဲ့……
အရမ်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့ မ​ကောင်း​တဲ့​မိ​စ္ဆာ​အ​တတ်ကိုနိုင်တဲ့ ကျပ်​ခိုး​ရဲ့ဂ​မ္ဘီ​ရအ​စွမ်း